बनको खयर, मै भेट्न आएको माया भएर ! - नेपालबहस
बनको खयर, मै भेट्न आएको माया भएर !
१० फागुण २०७७ | १२:४५:५५ मा प्रकाशित
१० फागुन, काठमाडौं । राजन कार्की र समिक्षा अधिकारीको आवाजमा रहेको नयाँ लोक तथा दोहोरि गीत भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ। ‘बनको खयर’बोलको गीतमा सुन्दर हमालको शब्द तथा राजन कार्कीको संगीत रहेको छ।
तारानाथ आचार्यको संगीत संयोजन रहेको गीतको भिडियोलाई प्रकाश भट्टले निर्देशन गरेका छन्। भिडियोमा राजन कार्की,सुबिक्षा हमाल,सवि हमाल,सुवि हमाल र बाल कलाकार सचिन परियार र अग्रता कार्कीको अभिनय रहेको छ।
सर्जक सुन्दर हमालले आफ्नै छोरीहरु सवि हमाल र सुवि हमाललाई यसै भिडियो मार्फत अभिनयमा डेब्यु गराएका छन्। नवराज उप्रेतीले छायाँकन गरेको भिडियो बिष्णु शर्माले सम्पादन गरेका छन्। सार्वजनिक गीत हमालको आफ्नै च्यानल सवि सुवि इन्टरटेन्टमेन्ट च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
एक दशकपछि घमेशको बनमा खयर लोकदोहोरी १ दिन पहिले
सञ्चारकर्मी बिष्णु ठकुरीको मन फाटेपछी १ दिन पहिले
मया पिरिममा अञ्जली र बिजयको रोमान्स ७ दिन पहिले
इलामका स्थानीय तह इतिहास र संस्कृति जोगाउदै ३ दिन पहिले
आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट सकिन्छ,लगत्तै आएको बाढीले बगाउछ २ दिन पहिले
ओली आज रुपन्देहीको बुटवलमा २ हप्ता पहिले
मुक्त कमैया शिविरमा पानीको हाहाकार २ वर्ष पहिले
प्रदेश नं ५ को नीति तथा कार्यक्रम : समृद्धिको आधार कृषि क्षेत्र २ वर्ष पहिले
क्रेनको डोरी चुडिँदा एक मजदूरको मृत्यु ६ महिना पहिले